Puntland oo guul sheegatay - BBC Somali
Puntland oo guul sheegatay
Dagaal saakay ku dhex maray, ciidanka Puntland iyo koox maamulku ku sheegay in ay yihiin xarakadda Al-Shabaab,tuulada Karin oo 40 km Koofur galbeed ka xigta Bosaso ayaa maanta duhurkii iskiis u joogsaday, halka labadii ciidan ee dagallamay ay goobahooda ku sugan yihiin.
Waxaa si wayn loo adkeeyay, amaanka goobaha muhimka ah iyo guud ahaan magaalada Bosaso, dadku si wayn u hadal hayaa dagaalka, hase ahaatee wax saamayn ah kuma yeelan colaadu, magaalada Bosaso marka laga eego nolosha dadwaynaha, ganacsiga iyo socodka gaadiidka intaba.
Maamulka Puntland ayaa sheegaya, inuu guul ka soo hoyeen dagaal saaka dhexmaray ciidankooda iyo xarrakada Shabaab, kasoo bilowday markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada Puntland oo ku sugnaa tuuladaasi Karin.
Waa la sii saadaalinayey:
Madaxweynaha Puntland, Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed, oo maanta ka hadlay dagaalkan oo ah mid beryahaanba la sii saadaalinayey ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay arrintu u dhacday, isagoo tilmaamay, in ciidamada dawladdu ay dagaal kula jiraan xarakada Shabaabul-Mujahidiin iyo dad kale oo ajnabi uu ku tilmaamay.
Wuxuu sheegay Madaxweynuhu in ciidamada dawladdu ay dileen 13 qof oo ka tirsan ciidanka Shabaab, isla markaasna ay qabteen sarkaal ka tirsan saraakiisha ciidanka shabaab.
Madaxweynaha oo la waydiyay khasaaraha soo gaaray ciidanka dawladdu wuxuu sheegay in saddex askeri ay ka dhaawacameen.
Hase ahaatee warar ka imanaya ilo madax bannaan ayaa tilmaamaya in dagaalkii ka dhacay tuulada Karin ay ku dhinteen, askar dawladda ka tirsan kuwo kalana ay ku dhaawacmeen, iyadoo uu jiro gaadiid kuwa dagaalka ah oo laga gubay dawladda.